पाथिभरा माताले हामी सबौको रक्षा गरुन हेर्नुहोस ०७६ साउन ०८ गते बुधबार ई. स. २०१९ जुलाई २४ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य
आजको– पञ्चाङ्ग वि.सं. २०७६ साउन ८,बुधबार, इ.स. २०१९ जुलाई २४, शकसंवत् १९४१, परिधावी संवत्सर,दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, ने.सं. ११३९ दिल्लागा, श्रावण कृष्णपक्ष,सप्तमी, १३:५६ उप्रान्त अष्टमी, नक्षत्र– रेवती, १२:५३ बजेउप्रान्त अश्विनी, योग– सुकर्मा, ७:१० बजेउप्रान्त धृति, करण– वव, १३:५६ बजेदेखि वालव, २६:३० बजेउप्रान्त कौलव,आनन्दादिमा उत्पात योग, चन्द्रराशि– मीन, १२:५३ बजेउप्रान्त मेष, सूर्योदय– ५:२३ बजे, सूर्यास्त– १८:५६ बजे र दिनमान ३३ घडी ३ पला। पञ्चक १२:५३ बजे समाप्ति। अष्टमी व्रत।
नया प्रबिधिको प्रयोग मार्फत नया ज्ञान सिक्ने समय रहेकोछ । बिभिन्न अवसर प्राप्त हुने हुनाले जोस जागर बढेर आउनेछ । पढाई लेखाईमा अरुभन्दा एक कदम अगाडि बढि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सकिनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ । माया प्रेममा नजिक भई भावना साटासाट गर्ने अवसर जुर्नेछ । बिहानको समयमा यात्रासँग सम्बन्धित कामहरु हुनेछन् ।
अध्ययन तथा अध्यापनमा सफतला मिल्नेछ भने बिचार गरेर बुन्ने योजनाहरु सफल रुपमा सम्पन्न हुनेछन् । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर बिशेषगरि स्कुल कलेज तथा शेयर बजार तिर गरिने लगानिमा सुधार भएर जानेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने आफन्त तथा आत्मीय मित्रहरुबाट सहयोग पाईने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । भौतिक सम्पति तथा मन परेको सामान प्राप्त हुने हुदा खुसिले उचाई नाघ्नेछ । बिहानी पखको समय मध्ययम रहेकोले आमा वा घर परिवारका सदस्यहरुलाई छोडि यात्रा गर्नु पर्दा नरमाईलो लाग्नेछ ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले लामो तथा छोटो दुरिको रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सहयोग पाईने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । घरजग्गा तथा पशुपालन व्यावसायमा समय खर्चने हरुले मनग्गे आम्दानि गर्न सक्नेछन् । समयमा काम नसकिने हुँनाले मान सम्मानमा कमिको महशुस हुनेछ । माया प्रेममामा एक अर्काबिच केहि समयको लागि टाडिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना हुनेछ ।
कन्भिन्स गर्ने पावर बढ्ने हुँनाले अरुलाई सजिलै प्रभावमा पारेर काम लिन सकिनेछ । कलात्मक तथा सिर्जनात्मक कामबाट सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिनेछ भने गित संगित तथा चलचित्र क्षेत्रमा समय दिनेहरुका लागि फरक बिषयबस्तुमा भुमिका निर्बाह गर्नु पर्ने हुँनसक्छ । व्यापारमा लगानि बढाई मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । बिहानको समय मध्यमय रहेकोले राजनिति तथा जनतासँग घुलमेल गर्दा वा काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला आलोचना हुन सक्छ ।